Kunshan Quanshun aluminum ibe ya bụrụ Co., LTD., Hiwere na 2000, nwere ụlọ ọrụ atọ, ya bụ, Kunshan Quanshun Aluminium, Kunshan Quanshun Aluminium forging co., LTD., Na Kunshan Quanshun Auto aluminum akụkụ Co., LTD., Na-enwe kwa afọ mmepụta uru nke 200 nde yuan. Bụ a set nke aluminum extrusion, aluminum alloy nhazi, akpakanamde aluminum alloy akụkụ mmepe dị ka otu n'ime ike ụlọ ọrụ. The ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe ndị 150 mu, na 100,000 square mita nke ogbako, 150 ọrụ na kwa afọ ahịa nke 200 nde yuan.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ike dị ike, nke nwere njikwa dị elu, teknụzụ, nyocha, ndị ọrụ mmepụta, dịka ọrụ ndị ahịa chọrọ n'ọtụtụ ọrụ dị iche iche si nye ngwaahịa, mmepe nke ụdị dị iche iche, teknụzụ nhazi dị iche iche nke elu- àgwà aluminum alloy akụkụ. Ọ na ọtụtụ-eji ụgbọala, ọgba tum tum, electric ike, elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè, agha ụlọ ọrụ, spinning igwe na ndị ọzọ ọrụ.
Companylọ ọrụ ahụ nwere usoro mmesi obi ike zuru oke ma dị irè na teknụzụ na usoro nhazi a pụrụ ịdabere na ya, yana tọn 1650, 800 tọn nke akụrụngwa extrusion, nwere ike mepụta nkọwa dị iche iche nke ogwe osisi alloy, ahịrị, profaịlụ; Na 1600 tọn, 1000 tọn, 630 tọn, 400 tọn, 300 tọn 10 tent dị ka esemokwu pịa, nwere ike na-emepụta 5 mm ~ 800 mm Ø Ø aluminum forgings; Advanced anwụ etiti, okpomọkụ ọgwụgwọ, quenching, ịka nká, elu ihe pickling na CNC CNC center na ndị ọzọ na ngwá nwere ike izute ndị ahịa si ebu mmepe na ngwaahịa gụchara chọrọ. Zọpụta mmepụta na njem na-eri ruo oke kachasị iji nweta ihe ndị ahịa chọrọ.
Quanshun agafeela ma tinye n'ọrụ ISO9001: 2000 sistemụ mma, ma na-agbaso amụma dị mma nke "njikwa dabere, ịdị mma, ịdị mma ma na-aga n'ihu n'ihu". Ọ na-enye ndị ahịa ngwaahịa na ọrụ dị elu na-emezu ihe ha chọrọ, si otú a na-enweta nkwenye na ntụkwasị obi nke ndị ahịa. Nnukwu ụlọ ọrụ dị iche iche na nke ọkara dị ka Giant, Oricombamag, Luo Group, Ningbo Top Group, Hetian Industrial, Zero MotoCYcl, Ensto eguzobewo mmekọrịta dị ogologo oge ma kwụsie ike. Ahịa mba ụwa na-agbasa n'ike n'ike. Ngwaahịa na-ere nke ọma na Europe na America, ndịda ọwụwa anyanwụ Asia.
Anyị ji obi anyị niile na-anabata ndị ahịa n'ụlọ na mba ofesi ileta na kpakorita azụmahịa, ma na-arụ ọrụ ọnụ maka ọdịnihu dị mma.
Ọkachamara aluminom agbaghara akụrụngwa
Anyị nwere ndị otu r & D siri ike, nwere ike ịnye gị usoro iji kwalite ọrụ ngwaahịa ahụ.
Usoro ezughị okè
Anyị nwere sistemụ ahịa zuru oke ma sie ike zuru oke, nke mere na nrụpụta na ire ere enweghị nchekasị.
Anyị nwere akụrụngwa nyocha zuru oke yana ndị ọkachamara nyocha iji hụ na ngwaahịa gị niile bụ ngwaahịa tozuru oke.